Liverpool Ma Doonaysaa Garabka Ajax Ee Antony?
[ June 26, 2022 ] Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Caawa Oo Sabti Ah 25 June	Warka Xiisaha Leh
[ June 25, 2022 ] Xiddiga Gareth Bale oo Heshiis la Gaaray koox aan ka mid ahayn naadiyashii lala xidhiidhinayay	Wararka Ciyaaraha
HomeWararka CiyaarahaLiverpool ma Doonaysaa Garabka Ajax ee Antony?
May 18, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dejisay qorshaheeda saxiixa garabka Ajax ee Antony, iyadoo uu shaki ku jiro mustaqbalka Sadio Mane .
Ka dib markii uu yimid Amsterdam laba sano ka hor, ololihii labaad ee Antony ee Johan Cruyff Arena ayaa dhaaftay xilli ciyaareedkiisii ​​​​ugu horeysay, isagoo dhaliyay 12 gool 10 caawin 33 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Mustaqbalka weeraryahanka Reds ee Mane ma cadda, isagoo xiriir xooggan la leh kooxda Bundesliga ka dhisan ee Bayern Munich, taasoo sii kordhisay wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan imaanshaha Antony ee Anfield.
Sida laga soo xigtay The Echo , Liverpool ayaa tartan kala kulmi doonta Manchester United iyo Newcastle United si ay u helaan Antony, kaasoo lagu qiimeeyo 50 milyan ginni iyadoo seddex sano ay ka harsan tahay qandaraaskiisa Ajax.
Tababaraha cusub ee Red Devils Erik ten Hag ayaa la sheegay inuu xiriir aad u wanaagsan la leeyahay 22 jirkaan, waxaana laga yaabaa inay Old Trafford ka dhigto meesha ugu macquulsan, laakiin Jurgen Klopp ayaa sidoo kale raaci doona ciyaaryahanka garabka ka ciyaara.
Guud ahaan, xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil ayaa dhaliyay 22 gool, waxaana uu caawiyay 20 gool 79 kulan oo uu u saftay Ajax.
Manchester United , Chelsea iyo Tottenham Hotspur oo ku Dagaalamaya saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Atletico Madrid Yannick Carrasco
Cristiano Ronaldo oo la filayaayo inuu sii joogo Manchester United